အမျိုးသားအများစုဟာ Accessory ပိုင်းမှာဆိုရင် ဖိနပ်ကိုအလေးထားပြီး သေချာဝယ်စီးတတ်ကြပါတယ်။ကြိုက်ပြီဆိုရင်လည်း စျေးဘယ်လောက်ကြီးကြီး အငတ်ခံပြီးဝယ်တဲ့အထိကို လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အမျိုးသားတိုင်းနဲ့ လိုက်ပြီး ရှိထားသင့်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။ဒီထဲမှာ ဖော်ပြသွားမယ့် ဖိနပ်တိုင်း ရှိစရာမလိုသလို ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ ဖိနပ်တွေလည်း ပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် ဒီဖိနပ်တွေက ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်တဲ့ ဖိနပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အနည်းဆုံး တစ်ရံတော့ရှိထာသင့်တဲ့ ဖိနပ်တွေထဲမှာ Converse All Star နဲ့ Vans ကအမြဲထိပ်ဆုံးကပါ။ Old Skool ဒီဇိုင်းစီးချင်ရင်စီးနိုင်သလို နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ ပုံစံတွေကလည်း မိုက်နေတာမို့လို့ ရွေးချယ်ရင်လည်းမမှားပါဘူး။ လည်တိုနဲ့ လည်ရှည်ကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာပုံစံ ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
လူငယ်ဆန်ဆန် ခပ်လန်းလန်းပဲသွားမလား? တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကိုကြီးအထားနဲ့ပဲ ဒိုးချင်လား ဘယ်အချိန်မဆို အဆင်ပြေတဲ့ Air Jordan ဟာလည်း တစ်ရံလောက်မရှိမဖြစ် ရှိကိုရှိထားရမယ့် အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပူတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာမို့လို့ ဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး Sandals လိုမျိုးကြိုးသိုင်း ဖိနပ်လေး တစ်ရံလောက်လည်းရှိသင့်ပါတယ်။ယောက်ျားလေး တော်တော်များများက ဟိုနားဒီနားသွားတာမျိုး၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ချိန်းပြီး ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာလောက်ကို Sneaker တွေ Shoe တွေစီးသွားတာရှားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ အရှည်နဲ့ဆိုရင်လည်း အထာကျနေဦးမယ့် Sandal တွေက ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ ဘယ်နေရာမဆိုသွားလို့ရပြီး ဘာနဲ့ပဲတွဲဝတ်ဝတ် အထာကျနေဦးမှာပါ။
Vintage ပုံစံနဲ့ အထာကျကျ ဝတ်လိူ့ရမယ့် ဖိနပ်ဆို Chelsea Boots တွေကလွဲပြီး ဘာတွေများရှိနိုင်သေးလို့လဲ။ ပုံမှန် Casual Wear ကနေ ရုံးတက်တာအထိ အသုံးဝင်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဝတ်ရတာ ချွတ်ရတာလည်း လွယ်တာမို့လို့ အလုပ်သိပ်မရှုပ်ပါဘူး။
ကိုယ်က shoe လည်းစီးချင်တယ်၊ ဖိနပ်ကြိုးတွေချည်ရ ဖြည်ရမှာ ပျင်းတဲ့သူ၊ အလွယ်တကူကောက်စွပ်သွားရတာပဲ ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ Slip On ဒီဇိုင်းတွေကို ရွေးသင့်ပါတယ်။ ဖိနပ်သားကိုတော့ Vans လို Canvas သားထဲကဖြစ်ဖြစ် Leather ထဲကဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်taste အတိုင်း ရွေးချယ်ရုံပါပဲ။
ပွဲအခမ်းအနားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်သွားတဲ့အခါ လိုအပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် leather shoe တွေကလည်း အမြဲမဟုတ်တောင် တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါ စီးရတတ်တာ ကြောင့်ရှိထားရင် ကောင်းပါတယ်။
Why Quit Smoking? How to cut?